नेपाल आइडलका जजहरु परिवर्तन हुँने, नयाँ जजमा दुर्गेश थापा, पुजा शर्मा र मीना ढकाल ? – Samriddhakhabar
नेपाल आइडलका जजहरु परिवर्तन हुँने, नयाँ जजमा दुर्गेश थापा, पुजा शर्मा र मीना ढकाल ?
July 21, 2021 July 21, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on नेपाल आइडलका जजहरु परिवर्तन हुँने, नयाँ जजमा दुर्गेश थापा, पुजा शर्मा र मीना ढकाल ?
नेपाल आइडलका जजहरु परिवर्तन हुँने, नयाँ जजमा दुर्गेश थापा, पुजा शर्मा र मीना ढकाल ?,काठमाडौँ ।बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय गायन रियालिटी शो “आइडल”को फ्रेन्चाइज “नेपाल आइडलमा” जजहरु परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ।
नेपाल आइडलको चौथो सिजनमा आएर जजसरु हरु परिवर्तन हुन लागेको हुन्।यस अघि लगातर तिन सिजन जज रहेका संगीतकार न्ह्यु ब्रजाचार्य, कालीप्रसाद बाँस्कोटा र गायिका इन्दिरा जोशी चौथो सिजनमा आएर बाहिरिने भएका छन्।
आइडलका जजहरु संग ३ वर्षको सम्झोता हुन्छ सो सकिए पछि अन्य देशमा पनि जजहरु परिवर्तन हुन्छन। सोहि अनुसार नेपाल आइडलमा पनि परिवर्तन भएकोजनाएको छ । खास कारण के हो त्यो समय संगै बाहिर आउँला?
कोरोनाका कारण रोकिएको चौथो सिजन अनुमति पाएँ लगत्तै सरुहुने नेपाल आइडलले जनाएको छ । जजहरु परिवर्तनको समाचार अनलाइन खबर डटकममा प्रकाशित भए पछि धेरैले नया जजको रुपमा पूजा शर्मा, दुर्गेश थापा, नव गायक सचिन परियार, मीना ढकाल ,जोती मगर , भेटेन लगायत हुनु पर्छ भने प्रतिकृया दिएका छन् । भने कतिले शम्भुजित बाँस्कोटा, सुगम पोखरेल र मेलिन राईको नाम सिफारिस गरेका छन्।
हेर्नुहोस् अनलाइन खबरको समाचारमा दुर्गेश, पुजा, भिटेन , ज्योती मगरलाई नयाँ जजको रुपमा हेर्न चाहनेहरु
अनलाइन खबर डटकमका प्रकाशित समाचार यस्तो छ। गायन रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ नरोकिने आयोजकले जनाएको छन् २०२१ भित्रै यसको चौथो सिजन शुरु गरिसक्ने ‘नेपाल आइडल’का निर्देशक सुरेश पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार तीन सिजनका लागि पाएको फ्रेन्चाइजको अनुमति सकिएको र कोरोना महामारी पनि रहेकाले चौथो सिजन सुरु गर्न ढिलाई भएको हो।
उताबाट अनुमति पाउन साथ चौथो सिजन शुरु गर्छौ । सन् २०२१ भित्र नै शोको छायांकन सुरु गरिसक्छौं’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने। चौथो सिजनमा भने यसअघिका ३ श्रृङ्खलाका तिनै जना निर्णायकहरु परिवर्तन हुने पौडेलको भनाई छ । ‘निर्णायकहरु अन्य देशमा पनि परिवर्तन भईरहेका हुन्छन् । उहाँहरुसँगको सम्झौता पनि तिन वर्षकै थियो । उहाँहरु पनि बाहिरी कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभयो’, पौडेलले अगाडि भने–‘सांगीतिक क्षेत्रमा स्थापित थुप्रैको सूची तयार छ । निर्णायक को हुने भन्ने फाइनल भएको छैन।
यसअघिका तीनै शोजका निर्णायकमा संगीतकार न्ह्यु ब्रजाचार्य, कालीप्रसाद बाँस्कोटा र गायिका इन्दिरा जोशी थिए।
नेपाल आइडल’मा बुद्द लामा, रवी ओड र सज्जा चौलागाँई क्रमशः पहिलो, दोश्रो र तेश्रो सि।
हेर्नुहोस् कक्षा १२ को परीक्षा तालिका !
लुम्बिनी ठेक्का विवाद प्रधानमन्त्री देउवा र अख्तियारसम्म।
मोटरसाइकल धुने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु
June 26, 2021 खबर समृद्ध
June 15, 2021 खबर समृद्ध